Matty's Inn - I-Airbnb
Indawo yam ikufuphi nolwandle - imizuzu esixhenxe ngeenyawo. Uya kuyithanda i-Matty's ngokuntyiloza kweentaka kusasa, iziqhamo zamaxesha onyaka, kunye nenyaniso yokuba sibekwe emazantsi enduli ejonge kuLwandlekazi lweAtlantiki.
IMayaro yilali yokuloba; ikhaya kwiinkampani ezininzi zeoyile negesi. Umxube wobomi basemaphandleni kunye nomnqweno wasezidolophini yinto ekhethekileyo yeendwendwe. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abahambi bebodwa, abahambi ngezoshishino, kunye neentsapho (kunye nabantwana).
I-Matty's Inn yahlukile kuba idibanisa ukulula kunye nokusebenza ukuze ukonwabele ubomi kwindawo oya kuyibiza ngokuba likhaya lakho kude nekhaya. Icocekile, iphangalele kwaye iyafikeleleka. Igumbi ngalinye limalunga ne-289 sq ft.
IMayaro yiDolophana yokuloba, kodwa ikwalikhaya kwiinkampani ezininzi zeoyile kunye neenkonzo. Loo nto isenza 'sixakeke' kakhulu amaxesha amaninzi emini. Ke ngoko, abantu bazibandakanya kwinani lamashishini amancinci aqhutywa ekhaya kwaye njengazo zonke iilali ezibhalwe kwiinoveli, unokufumana abantu ababonelela ngesiqabu se-comic, okanye into entsha kwindlela yabo yokuphila. Abantu abaninzi bachitha imini yabo kwiivenkile zerum zengingqi kwaye badlale imidlalo yamakhadi nabantu basekhaya kunye nabangaphandle.
Kukwakho neendawo ezininzi zembali-iSitrato saseChurch kunye ne-RC Church ethiywe ngayo isitrato, sinqumla nje kwisitalato esisuka eMatty's Inn yethu.
Undwendwe ngalunye luya kuba nenombolo yam kwaye lunokufowunela naziphi na iinkonzo ezongezelelweyo ezingekachazwa okanye zichazwe ngokweenkcukacha kwiSikhokelo sethu.